Koowheel jiilka 2aad e-skeidgareeyo saaran marka hore - Jomo Technology Co., Ltd
Hi ~ Sababo la Koowheel 2 nd jiilka skeidgareeyo korontada Kooboard waa skeidgareeyo korontada ee ugu horeeyey ee noloshayda, oo aan u dhif ah ku qaataan lacag aad ku iibsato sida toy qaali ah (Waxa intaa dheer in, iibsaday baaskiil raad leh "sabab wanaagsan" ayuu ...) sidaasi darteed waxaan ahaa u xiiseynayey in ay si park tagaan. Oo waxaan ahaa mid aad u xanuun badan in ay ku dhameysatay kaalinta baaritaanka kala duwan oo masaafada, ka dib baan ku sharixi Maxay daran.
Ka hor inta aadan ka akhriso sheekada, marka hore wadaagaan xogta lagu skeidgareeyo ee tixraaca.
Load guud ee skeidgareeyo korontada koowheel waa 61.9KG la miisaanka jidhka 58.5KG + qalab ilaalinta jirka 1.6KG + kabaha aalladda khafiifa orodka 0.2KG + 960ml Water + 1kg furaha taleefanka gacanta iyo 0.6KG burburka.
safarka ugu horeeya ee
shalay cimilada ahaa kuwo kulul, doonayay in ay qaataan skeidgareeyo si Park Riverside, laakiin sababta oo ah waqti qoyska casho ah si aad ugu dhow, wuxuu lahaa si ay u tagaan meel u dhow qararka ah in ay isku dayaan. At fiidkii, Park waxay leedahay dad aad u badan, sidaas oo kale ayaa dardargelinta iyo deceleration waa mid aad u soo noqnoqda, at ah oo ku saabsan 5:30 pm, aan ayaa dib loogu yeeray by qoyskeyga, markan qaatay 55 daqiiqo.
Ka dib markii casho, ma quusan rajada in ay mar kale tagaan.
Oo markii la casheeyay qoyskeyga oo ku soo celi Park Riverside ee 9 subaxnimo, markan baydalka kaliya ee kaalinta labaad goos goos ah, sidaas ciyaaro xawaaraha ay in muddo ah, habka More leisurely inay ku raaxaystaan, markan fuushan laba saacadood iyo badh .
On fiidkii, sibxaday 10.68KM.
Sagaal saac fiidkii, mar ay simbiriirixan 28.76KM.
Jiirada badala yar marka sare celcelis ahaan waa 26 mitir.
Xogta kor ku xusan waxaa lagu diiwaangeliyaa oo ay APP "Geo Tracker", boos satellite in hab saxda ah. haadka ayaa baaskiil ku saabsan 2.3 km, iyadoo ku dhowaad dhammaan dhulka sallaxa ah laami, kaliya 50 mitir waa wax ku socoto iyadoo marmarka (laba meelaha guud ee 50 mitir). lahaa waxaan ku bixisay 3 saacadood iyo 14 daqiiqo (ku dhowaad dhammaan taagan skateboard ka ~ _ ~ "), waxa ay dhab ahaantii waa waayo-aragnimo arrin xanuun badan.
Markan anigu unkashadan 39,44 km la batari buuxa eedeeyay ~ Waxaad ma arkaan khalad, mid ka mid batari, markii dhowr Waxaan doonayay ilaa siiyo guriga ka dibna maalin kale mar tijaabiyo, Tanu waa nolosha runtii arrin aan caadi ahayn ... ... ... ... (iyo markii ay maamusho bixi batteriga, gacanta taabtay batteriga soo baxday in qabow, motor kaliya a micro-kulka, runtii Good ~), waxaan u malaynayaa in haddii aan ma aysan joogsan oo tag, masaafada waa in ay ahaataa sare, haddii qof leedahay guddiga this, ka dibna waxaad isku dayi kartaa. Waxay tahay in muddo ka badan ayaan ku istaagi skeidgareeyo .
Inta lagu guda jiro howsha oo dhan, waxaan martay isbedelo badan xawaaraha iyo jejebiyey (my dardargelinta iyo deceleration oo kala duwan xawaaraha fadlan eeg sawirka kor ku xusan), sidaas darteed waxaan u qaadan in loo yeelo 20km kala duwan masaafada on xadka (sida ay waayo-aragnimo, farsameeya sida caadiga ah Iyadoo xawaaraha qubo daray xawaare joogto ah si loo cabbiro baxay a xogta u qurux badan, sidaa darteed ma rumaysan karo). Laakiin sidoo kale sababta oo ah fikrad this sidaa darteed waa inaan alaabooyinka qaar ka mid ah (Anigu waxaan ahaa qabaa in si lama filaan ah ay korontada go'day doonaa, leeyihiin in ay qabtaan 7.8 kg ah skeidgareeyo korontada si ay guriga dib).
Iyo sababta oo ah fikrad this qaldan, sidaa darteed waxaan ku unkashadan ilaa 12 subaxnimo, korontada waxaa runtii ka baabbe'een. (Yaa garanaya xogta lagu qori doonaa si muxaafidka ah ...... .. runtii waxaan laga badiyay), Waa 20km ka dhaqso badan aan lagu qiyaasay xawaaraha 20km. (sheekadan inoo sheegayaa, in la xasuusto macnaha nalalka bandhigay awood ka hor ciyaaro ee lagu skeidgareeyo korontada, hana u qaadan in saaraha kasta waa in ay ahaadaan adag ").
Afar dhabtooda oo iyaga ka mid ahaa fadhiiso on skeidgareeyo ah (play sida kart markii u daalan tahay, waa run ahaantii weyn)
At sagaal SFIga oo xadka xawaaraha ee ku saabsan 26.8KM ah.
Marka la soo koobo, baaritaan ka dib, soo socda la xaqiijin karaa:
masaafada ee skeidgareeyo korontada waa mid aad u wanaagsan, saarayaasha siiyaan macluumaadka waa mid aad u muxaafid ah.
Motor iyo batari tayo wanaagsan yahay, ka fuushaan siman ku dhowaad superheat lahayn.
wheel The on wadada leben ka nixin doonaa cagta.
Haddii ay jirto 12mm quruurux hoos giraangirta, giraangirihiina boodi doonaa.
Haddii ay jirto quruurux 5mm, wax saameyn ah kuma ay gacanta.
Biriigyada waa af iyo xasaasi ah, fadlan ha adag riixdo, iyo samayn diiradda hore wareejiyay.
waxqabadka dardargelinta sidoo kale waa wanaagsan yahay, waa in uu ka xiiso badan ka dib markii la furayay.
Waxay leedahay waafajinta wanaagsan wadada u xoqdo, dabacsanaan, oo loox ah oo kaliya si ay u sameeyaan giraangirihiina rakibo.
masaafada kor ku xusan iyo imtixaanka xawaaraha waxaa lagu sameeyaa iyada oo aan la furayay, oo waxaan furi doonaa si loo arko xawaaraha dhabta ah ee mar guddida ee soo socda.
waqti Post: Sep-29-2017